“UEFA waxay ka fikireysaa kaliya lacag, kama fikireyso ciyaartoyda” – Thibaut Courtois oo dhaliishii loo soo jeediyay dusha ka saaray xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub – Gool FM
“UEFA waxay ka fikireysaa kaliya lacag, kama fikireyso ciyaartoyda” – Thibaut Courtois oo dhaliishii loo soo jeediyay dusha ka saaray xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub
(Yurub) 12 Okt 2021. Goolhayaha xulka qaranka Belgium ee Thibaut Courtois ayaa xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ku eedeeyay inay diiradda saaraan dhaqaalaha kahor ciyaartoyda isagoo sidoo kale ku dhaliilay UEFA inay xiddigaha u isticmaalaan sidii kombuyuutarka ‘Robot’.
Goolhayaha Real Madrid ayaa ciyaaray labadii kulan ee UEFA Nations League isagoo kahor tagay France oo ay wareegga nus-dhammaadka isku arkeen iyo Italy oo ay la ciyaareen kulanka kaalinta saddexaad.
“Ciyaartaan kaliya lacag ayaa loo qabtay, waa inaan daacadda kaga hadalnaa” ayuu Courtois u sheegay hilinka Sky Sports mar uu ka jawaabayay dhaliil loo soo jeediyay qaab ciyaareedkiisa.
“Waxaan u ciyaareynay kaliya maadaama ay UEFA lacag kaga helayaan TV-yada.
“Hagaag, annaga ahaan ciyaar wanaagsan ayay noo ahayd waayo waxaan kahor tagnay Italy, iyagana waxay u ahayd ciyaar wanaagsan maxaa yeelay waxay kahor imaanayeen Belgium balse eeg sida ay kooxaha u baddeleen ciyaartoydooda, haddii aan labadeenna fiinaalka joogi lahayn waxaa ciyaari lahaa ciyaartoy kale” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, eedeynta 29-sano jirka shabaqa ilaaliya ayaa dhinacyo badan taabatay waxaana uu sheegay inay ciyaaraha ku badan yihiin gaar ahaan marka Nations League la ciyaarayo isagoo walaac hor leh ka sii muujinaya dhammaadka xilli ciyaareedkan, maalmaha fasaxa iyo waqtiga la ciyaarayo Koobka Adduunka.
Dembele iyo Aguero oo ku soo laabtay tababarka Barcelona... (Goormee ayay u safan karaan Blaugrana?)
Kooxda Liverpool oo sare u qaadday baacsigeeda Ousmane Dembele… (Halkee ayay wax marayaan?)